Lee Saung Gi (လီဆောင်းဂီ) – Korea Celebrities Fans
Lee Saung Gi (လီဆောင်းဂီ)
Date: February 13, 2017Author: KOREA CELEBRITIES FANS0Comments
Name – Lee Saung Gi ( လီဆောင်းဂီ )
Birthdate – 13 .Jan . 1987
Origin – တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ၊ ဆိုးလ်မြို့ ။
Years Active – 2004 မှ ယခု ထိ
Agency – Hook Entertainment
Education – International Trade and Commerce [ Dongguk University ] on Feb 20 . 2009
လီဆောင်းဂီကိုတော့ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက် ၊ ၁၉၈၇ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ မှာ မွေးဖွားပါတယ် ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကနေ စတင်ပြီး အနုပညာလောကထဲဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနုပညာ Agency ကတော့ Hook Entertainment ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လီဆောင်းဂီဟာ” Ballad Prince ” ဆိုပြီး နာမည်ကြီးလူသိများပါတယ် ။
လီရဲ့ ” Because You’re My Woman ” , ” Will You Marry Me ” , ” Return ” စတဲ့ သီချင်းတွေဟာလည်း နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ် ။
လီ ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလက Yoona နဲ့ Date ခဲ့ပါလို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူတို့ကြားထဲက ဆက်ဆံရေးဟာလည်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၁၅ August 13 ခုနှစ်မှာတော့ နှစ်ဦးလုံးရဲ့ Agency တွေက သူတို့နှစ်ဦးဟာ ပြတ်စဲသွားပြီလို့အတည်ပြုပြောပါတယ် ။
Lee Saung Gi
Previous Previous post: ကိုရီးယား အကောင်းဆုံးစာရေးဆရာဖြစ်လာတဲ့ Goblin နဲ့ DOTS ဇာတ်ညွှန်းဆရာ
Next Next post:6packs နဲ့ စွန်းလန်းနေတဲ့ နမ်ဂျိုဟွတ်